प्रतिनिधिसभा बैठकः महिला हिंसाका घटनाप्रति संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण – Himalaya TV
Home » समाचार » प्रतिनिधिसभा बैठकः महिला हिंसाका घटनाप्रति संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभा बैठकः महिला हिंसाका घटनाप्रति संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण
२८ भाद्र २०७५, बिहीबार १४:०१
काठमाण्डौ, २८ भदाै । सांसदहरूले कञ्चनपुर घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले महिला हिंसाका घटनाप्रति संवेदनशील बन्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद विन्दा पाण्डेले कंचनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना झन्-झन् रहस्यमय बन्दै गएको भन्दै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसंग माग गरिन् । अनुसन्धान टोलीमा रहेका सदस्य आफैं कहिले ज्यान खतरामा रहेको भन्दै राजिनामा दिने र कहिले फिर्ता हुने घटनाले आम नागरिकमा संसय पैदा भएको बताइन् । रौतहटमा जनप्रतिनिधि नै आपराधिक घटनामा मेलमिलाप गराउन लागिपरेको तथा काठमाण्डौ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा अपराधिक घटना भएको समाचार लागातार आइरहेको भन्दै उनले भोलिको सदनमा अपराध पत्ता लगाउने, कारवाही गर्ने, अपराधी जोगाउन लाग्ने र हिंसा गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि कारवाही गर्ने र अपराध न्यूनिकरणको बारेमा सरकारको योजना बारे पनि जानकारी गराउन माग गरिन् । उनले मुलुकभरका अपराधको बारे थप छानविन गर्नका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरिन् ।
सांसद शान्ता चौधरीले कुनै पनि किसिमको अपराध क्षम्य हुँदैन भन्ने सन्देश नदिएसम्म मुलकभर आपराधिक घटनामा कमी नआउने बताइन्। बलात्कार लगायतका घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारवाही गरी अपराधीलाई कुनै पनि किसिमको उनमुक्ति हुने छैन भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सांसद सरवत आरा खानमले दुधे बालिकादेखि वृद्ध आमासम्म बलात्कारका घटना हुने गरेको भन्दै महिलामाथिको हिंसा कहिले रोकिन्छ भनी सरकारसंग प्रश्न गरिन् । उनले हिंसामा संलग्नमाथि कहिले कारवाही हुन्छ भनी प्रश्न गरिन् ।
सांसद सिता देवी यादवले महिलाको सुरक्षा नभएसम्म देशको सुरक्षा हुन नसक्ने बताइन् । जनताको रक्षक प्रहरी नै अपराधीको प्रमाण नष्ट गर्न र अपराधीलाई जोगाउन लागिपर्छ भने यो देश कहाँ जाँदैछ भनी उनले प्रश्न गरिन् ।
सासंद सुजाता कोइरालाले एकपछि अर्को बालिका बलात्कारका घटना भइरहँदा पनि सरकार किन मौन बसिरहेको छ भनी प्रश्न गरिन् । उनले निर्मला पन्त हत्यामा संलग्न दोषी अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नसक्नुले राज्य नै अपराधीलाई संरक्षण गर्न लागिपरेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताइन् । उनले भनिन् “कञ्चनपुर घटनाबारे गृहमन्त्रालयबाट गठित छानविन समितिका सदस्यले किन राजिनामा दिन्छ ? थ्रेट आएको हो भने कसले थ्रेट गर्छ ? त्यसको जानकारी पाउँ । यी अपराधीमाथि सँजाय हुनुपर्छ । त्यसको जवाफ पार्लियामेण्टलाई चाहियो ।”
सांसद सुजाता परियारले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने प्रशस्त प्रमाण फेला पर्दा पनि प्रहरीले ढाकछोप गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ती जनाइन् । सरकारले यस्तै लापरवाही गर्ने हो भने दिनानुदिन यस्ता घटना बढ्दै जाने बताइन् ।
सांसद संञ्जय कुमार गौतमले मुलुकभरका हिंसाका घटना बढ्दै गर्दा पनि सरकार उदासिन हुनु र्दुभाग्यपूर्ण भएको भन्दै घोर भत्र्सना गरे । उनले हत्या, हिंसा र बलात्कारका बढ्दो घटनाले मुलुकमा सरकार छ ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको भन्दै सरकार भएको अनुभूति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद हिरा गुरुङले कञ्चनपुर घटनाका आरोपीलाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा नलिनुले सरकार आफैं घटनाका दोषीलाई जोगाउन लागिपरेका र प्रहरी नै घटनामा संलग्न भएको आंशका उब्जाएको भन्दै छानविन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने “मिठो बात गरेर जनतालाई मनोरञ्जन दिने सरकार कला मण्डली जस्तै बनेको छ ।”